Ndị na-ede blọgụ 2,000 egwuregwu Technorati? Waaaaah! | Martech Zone
Ndị na-ede blọgụ 2,000 egwuregwu Technorati? Waaaaah!
Wednesday, February 7, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Edere m blog na oge ọzọ na Z-Ndepụta. Ọ bụ ndepụta dị egwu nke ndị na-ede blọgụ a ma ama nke na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ha ma nwee ọkwa na-eto eto na blogosphere na web. Edegharịrị ndepụta ahụ na ọtụtụ narị blọọgụ, na-emetụta ọkwa anyị na Technorati na ebe a na-etinye Injin Nchọgharị anyị. N'elu elu ya, ịde blọgụ A-lister Seth Chinekein ọbụna nọrọ oge ụfọdụ ikwu banyere ya.
Nnyocha ohuru malitere site na nchịkọta nke ndị na-ede blọgụ 2000 faces ihu nke blọọgụ si n'akụkụ ụwa nile. Emere m nke ahụ, kwa! Ugboro abụọ m nọ na ndepụta ahụ ma arịọghị m ya. Na nnwale nke blogger 2000, emere m afọ ofufo, mana ọ bụ n'ezie mgbe etinyechara m ya na enweghị ihe ọmụma. Akwụsịrị m inyefe 2,000 na saịtị m ọ bụ ezie na… nke ahụ bụ nnukwu olu nke onyonyo iji gosipụta!
Ugbu a ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ na-eti mkpu na nke a. Sites ọbụna na-eti mkpu ka boycott Technorati.
55,000,000 blọọgụ na ụwa na n'ụzọ ụfọdụ ndị a 2000 blọọgụ 'na-mkpatụ eluigwe na ala'. Nye m ezumike. Nke a bụ nnọọ ihe dị iche na-ekere òkè gị blogroll, erekwa njikọ na mmadụ, enye pụọ ahịa na ngwá ahịa maka banyere gị blog, linkbaiting, “Make me a Technorati Favorite” button, 'optimizing' for search engines, Igwu Ala,…. ma ọ bụ ọbụna ịzụta gị Technorati n'usoro site na mgbasa ozi na saịtị ndị ọzọ. John Chow, dịka ọmụmaatụ, na-aga n'ihu na-eji usoro ọ bụla iji nye ọkwa ya ume.
Achọrọ m ịma? Kpamkpam B NOTGH!!
Nke a bụ eziokwu folks… ihe ọ bụla ọzọ. Ọ na-akwụ ụgwọ iji kpọsaa, oge. Nke ahụ kwuru, mgbasa ozi nwere ike ịnweta gị n'ọkwá, mmetụta, ikike, na ntinye igwe search search mana ọ gaghị edebe ha. Iji mee ka ọkwa gị, ikike gị, ikike gị na ebe ị na-achọ injinị, ị ga-arụ ọrụ na ọdịnaya gị. Ma ọ bụghị ya, saịtị gị ga-aghọ ọnụ ụzọ na-agagharị agagharị nke ndị ọbịa na ogo gị ga-agbadata tubes.
Ka oge na-aga, ọkwa e buliri elu ga-agbada. Ka oge na-aga, blọọgụ dị mma ga-ebuli elu. A ga - enwerịrị ndị na - efe efe gafere gị nke na - erughị ya ma ndị mmadụ ị ga - efe gafere n’ezie. John Chow rịgoro ebe a na-arịgo ubube ma nyezie ndị na-agụ ya ọdịnaya dị mma ka ọ nọrọ ebe ahụ.
M na-echeta oge azụ mgbe Ihe otiti kwuru otú saịtị Social Bookmarking si emebi okporo ụzọ ya. Ọ nọdụrụ ọdụ ma jụọ maka boycott nke Digg? Mba! Ọ malitere atụmatụ ọhụrụ nke na-agba ọsọ ma na-ekpughere ndị na-ege ntị ọhụụ.
Nke a abụghị ụlọ akwụkwọ ọta akara, kwụsị ịkwa ákwá wee laghachi n'egwuregwu ahụ. Nwoke elu!
Nke a bụ ndepụta nke blọọgụ banyere ndepụta… Ana m etinye ha na ndepụta mara mma ka ị nwee ike itinye ha na post gị ma ọ bụrụ na ị kpebie ịza ajụjụ na ndepụta ndị na-ede blọgụ 2,000. Ikekwe anyị nwere ike ịmalite 2,000 na-ekwu okwu banyere Ndepụta 2,000.
Blog nke Zoli
O doro anya na ndị na-ede blọgụ a na-ekwu maka nnwale nke ndị na-ede blọgụ 2,000 na-ebuli ọkwa ha na Technorati. Ikekwe ọ bụrụ na anyị taa onye ọ bụla nọ na ndepụta ahụ, anyị kwesịrị ịta onye ọ bụla blọọgụ banyere ndepụta ahụ, eh?!
Arenye ka ị ga-agwa m na m erughị eru ogo m nwere? Ekwenyere m n'ezie na ọdịnaya na ozi m na-ewetara ndị na-agụ akwụkwọ m bụ nke kachasị mma ma kwesịkwa karịa ọtụtụ blọọgụ Top 100 Technorati dị ebe ahụ. Ọ bụghị maka Technorati ikpebi. Ọ bụghị nke gị ka ị ga-ekpebi. Ọ bụ maka ndị folks na-aga n'ihu na-agụ ma blọọgụ m ka ha kpebie. Ndị ahụ bụ ndị m na-ejere ozi.
Tags: ndị na-ede blọgụỊgba Cha Chateknụzụ
Nkwupụta Mee ka ndị ọbịa na-agụ Blog gị
Mmebe nke Ọdachi
Feb 7, 2007 na 11:53 PM
Feb 8, 2007 n’elekere 7:33 nke abali
Abụ m nnukwu onye na-akwado Technorati na ọ ga-esiri m ike izere ya. Enwere m olileanya na ha ga-amata na mgbe ị na-anwa 'tweak' ochichi onye kwuo uche ya, ọ bụghị ọchịchị onye kwuo uche ya ọzọ.
Feb 8, 2007 n’elekere 1:47 nke abali
Onye na-achịkwa algọridim na-enweta mmeri!
Douglas kwuru nke ọma ma nabata na Bloke's Network nke ndị na-ede blọgụ nwere ọgụgụ isi.
Feb 8, 2007 n’elekere 7:32 nke abali
E kwuru nke ọma, BB! Na ekele !!!
Feb 8, 2007 na 4:10 PM
Hey Doug. M na-ekweta na ọtụtụ n'ime ihe i kwuru. Ọ bụrụ n’ịgụ ọkwa m (nke ị mere), ị ga - ahụ na m na - ajụkarị usoro ogo teknụzụ ya n’onwe ya. Ọ bụghị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ma ihe dị na heck ọ pụtara.
Na btw, ekwenyere m na paragraf ikpeazụ gị gbasara onye kpebiri mkpa blọgụ m. Agụụ nwa, ndị na - agụ ya!
Feb 8, 2007 na 7:37 PM
Daalụ Dawud! Anaghị m ekwenye na usoro teknụzụ Technorati… M na-eche na ọ bụrụ na ndị na-ede blọgụ kpebie ịkwalite ndị ọzọ na-ede blọgụ ranking ogo ahụ na-arụ ọrụ n'ezie, ọ bụghị ịbụ 'egwuregwu'. Ọ bụ usoro dị mma maka ịkwalite blọọgụ na-anaghị akwalite.
Mgbalị ọzọ na ogo nke ahụ dị mma bụ Todd And's Power 150. Todd na-agba mbọ ịtụle igwe injinị ọkwa ọ bụla ma akara ya.
Feb 8, 2007 na 4:25 PM
Ekwenyeghị m n'eziokwu na anaghị m na ndepụta 2000. Chọpụta, ọ ga-abụ ihe aka wuru onu oriri, mana m dịkwa mma na nke ahụ. Mmetụta ya ga-ada, m ga-ahapụkwa ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ karịa ka m malitere. Amalitere m blọọgụ na mbụ, ọ masịghị m ịrị elu nke amaghị aha. Amachaghị m na m ahapụla ya, mana emego m ọtụtụ ịrịgo.
Feb 8, 2007 na 7:34 PM
Nke ahụ bụ nnukwu okwu Douglas na m kwenyere 100%. "Ọrịrị nke anonymity"… ibu ahịrị. Ndị na-ede blọgụ ndepụta na-enwe mmasị ịkpọ ibe ha aha n'ihi na ha maara na ọ na-enyere ọkwa na ikpughe ha aka, yabụ kedu ka 'obere' ahụ si bilie ebe ahụ? Memes na ndepụta dị ka nke a bụ ngwá ọrụ zuru oke iji nweta ikpughe.
Daalụ maka ịza ajụjụ na ịkwụsị site!
Feb 8, 2007 na 6:06 PM
My post na isiokwu:
Na nchekwa nke ndị na-ede blọgụ 2000
Feb 10, 2007 na 2:32 PM
Ha. Kwuru nke ọma. Iri ya niile. Ihe ihere.
Feb 13, 2007 na 9:49 PM
Nke a bụ otu n'ime ihe kacha mma m gụrụ gbasara 2000 Bloggers Project. Daalụ.
Anyị na-ebi na http://www.2kbloggers.com n'agbanyeghị 🙂 M wepụrụ 300 mbụ n'ihi na ha ajụbeghị ka akụkụ nke ya. Afo okodu ke otu oro. You chọrọ ịlaghachi?
Feb 13, 2007 na 9:52 PM
Kpamkpam, Elaine! M hụrụ n'anya oru ngo. M hụkwara Technorati n'anya, ọ dịkwa m ntakịrị ntakịrị n'ihi otu ihe m hụrụ na ọrụ ahụ.
Daalụ maka ịjụ!
Mar 3, 2007 na 12: 39 PM
Daalụ maka ihe ị na-ekwu ma dowe site na!